Vaovao - Atsaharo ny fampidirana varavarana
A VARAVARANA Mijanòna (koa mpijanona varavarana, fijanonana varavarana na wedge varavarana) dia zavatra na fitaovana ampiasaina hitazonana varavarana misokatra na mihidy, na hisorohana varavarana tsy hisokatra malalaka loatra. Io teny io ihany no ampiasaina hilazana slat manify atsangana ao anaty vatan'ny varavarana mba hisorohana ny varavarana hidona rehefa akatona. Ny tokonam-baravarana (apetaka) dia mety ho fonosana kely na metaly 90 degre apetaka amin'ny vatan'ny varavarana iray mba hampijanonana ny varavarana tsy hikororoka (bi-directional) ary hamadika ny varavarana ho amin'ny lalana tokana (in-swing push na sintomina any ivelany).Misokatra ny varavarana
Ny varavarana iray dia mety hosakanan'ny vavahady izay zavatra matevina mavesatra fotsiny, toy ny fingotra, apetraka amin'ny lalan'ny varavarana. Ireo fijanonana ireo dia amboarina amin'ny ankapobeny.
 Raha ny tantara no jerena dia biriky firaka no safidin'ny besinimaro rehefa misy.
[2 Saingy, rehefa naseho ny toaka poizin'ny firaka, dia kivy tanteraka io fampiasana io.
 Fomba iray hafa ny fampiasana a fijanonana varavaranaizay wedge kely amin'ny hazo, fingotra, lamba, plastika, landihazo na fitaovana hafa. Ireo wedges vita amin'ireo fitaovana ireo dia matetika misy. Ny tendrony dia voadaka amin'ny toerany ary ny hery midina amin'ny varavarana, izay mihitsoka ankehitriny mankany amin'ny fijanonan'ny varavarana, dia manome fehezan-dalàna mijanona tsy hihetsika.
 Tetika fahatelo dia ny fampitaovana ny varavarana mihitsy miaraka amin'ny mekanisma fijanonana. Amin'ity tranga ity, bara vy fohy mifono kofehina, na fitaovana hafa misy fikororohana mafy, dia miraikitra amin'ny savily eo akaikin'ny faran'ny varavarana mifanohitra amin'ny sisin'ny varavarana sy amin'ny sisin'ny varavarana izay manakaiky ny lalana nikatony. Rehefa tazonina hisokatra hatrany ny varavarana, ahetsiketsika ny hidy mba hikasika ny tany ny faran'ny fingotra. Amin'ity fanaingoana ity, ny fivezivezena bebe kokoa amin'ny varavarana mankany amin'ny fikatonany dia mampitombo ny hery eo amin'ny faran'ny fingotra, amin'izay dia mampitombo ny herin'ny frictional izay manohitra ny hetsika. Rehefa hikatona ny varavarana dia alefa ny fijanonana amin'ny alàlan'ny fanosehana ny varavarana hisokatra somary misimisy kokoa, izay mamoaka ny fijanonana ary mamela azy hihodina ambony. Ny kinova vaovao amin'ny fampitaovana ny varavarana amin'ny mekanisma fijanonana dia ny fametahana andriamby ny fanambanin'ny varavarana amin'ny sisiny izay mivoha ivelany izay avy eo miditra amin'ny magnet na magnetie iray hafa amin'ny rindrina na hub kely eo amin'ny gorodona. Ny andriamby dia tsy maintsy matanjaka tsara hitazomana ny lanjan 'ny varavarana, fa malemy kosa afaka miala mora amin'ny rindrina na ny foibe
Fisorohana ny fahasimbana am-baravarana
Karazam-baravarana iray hafa no ampiasaina hisorohana ny varavarana tsy hisokatra lavitra ary manimba ny rindrina manodidina. Amin'ity tranga ity dia varingarina na dome vita amin'ny fingotra - na tsorakazo na bolongam-by vita amin'ny vy, hazo na plastika - no atsofoka ao anaty rindrina, mamolavola na ny gorodona eo amin'ny lalan'ny varavarana. Raha miraikitra amin'ny rindrina izy, dia mety ho roa santimetatra ambonin'ny tany, na amin'ny haavony toa ny fihaonana amin'ny vavahady. Ny varavarana fohy sy miraikitra amin'ny rindrina, matetika dome na varingarina vita amin'ny kofehy, dia antsoina indraindray hoe «wall bumper».
Indraindray, ny fijanonana dia ampiasaina izay mifamatotra eo afovoan'ny varavarana, ho toy ny ampovoan'ny fametahana varavarana. Ny fijanonana toy izany dia fantatra amin'ny varavaran'ny "hinge stop" na "hinge pin" ary matetika ampiasaina hisorohana ny fahasimban'ny famolavolana baseboard.